Epson T23 ပရင်တာကိုဘယ်လိုတပ်ဆင်မလဲ Linux မှ
Epson T23 ပရင်တာကိုထည့်သွင်းနည်း
La Epson T23 ၎င်းသည်စျေးနှုန်းချိုသာသောပရင်တာတစ်မျိုးဖြစ်ခြင်းနှင့် Epson ဖြစ်ခြင်းသည်အလွန်စျေးပေါသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ၊ Ubuntu မှာပရင်တာအလိုအလျောက်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုရှိပေမယ့်ဒီမော်ဒယ်ဟာရရှိနိုင်တဲ့ဒရိုင်ဘာစာရင်းထဲမှာမပေါ်ပါဘူး။ The အဖြေ၎င်းသည်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြစ်သော်လည်း (ပြီးပြည့်စုံသောပို့စ်တင်ရန်မသင့်ပါ။ ) ၎င်းကိုရှာဖွေရန်အလွန်ခဲယဉ်းသည်။ သင်ချိတ်ဆက်သောအခါ Ubuntu က၎င်းကိုရှာဖွေပြီးမည်သည့်ပရင်တာကသင့်အားမေးလိမ့်မည်နည်း။ သငျသညျ၏ထို option ပေးခြင်းအားဖြင့် driver ကိုရွေးပါ ပရင်တာကနေငါရွေးလိုက်တယ် Stylus CX5600 (သင် T20 ရွေးချယ်ရန်သွေးဆောင်ခံရလိမ့်မည်၊ သို့သော်အလုပ်မလုပ်ပါ) သေချာတာပေါ့၊ သင်ပရင်တာကိုသင်လိုချင်သမျှအမည်ပေးနိုင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီဒရိုင်ဘာကိုကျွန်တော်ရွေးခဲ့တယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » FileLet ရဲ့ UseLinux » Epson T23 ပရင်တာကိုထည့်သွင်းနည်း
ငါညွှန်ကြားချက်တွေဆုံးရှုံးသွားတယ်၊ ငါ nozzle တွေကိုဘယ်လိုသန့်ရှင်းရမယ်ဆိုတာသိဖို့လိုတယ်၊ ပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ပုံနှိပ်ရင်မှန်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာငါသိတယ်။
ငါ nozzles သန့်ရှင်းရေး, မှင်အဆင့်ကိုတိုင်းတာနှင့်စသည်တို့အသေးစိတ်သောဤဆောင်းပါးကိုဖတ်ရန်အကြံပြုအပ်ပါသည် ငါကအားလုံးပရင်တာများအတွက်အလုပ်မလုပ်ပါဘူးသင်သတိပေးသည်။
ခွေး linux ကိုအသုံးပြုသည် ဟုသူကပြောသည်
dog ကိုပြန်ပို့သည်အသုံးပြုသည် linux
မေးခွန်းတစ်ခုအနေဖြင့်သင်ကအရာတစ်ခုအတွင်းရှိမှင်အဆင့်ကိုကြည့်ဖို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးလား။ ကျွန်ုပ်သား၏ပရင်တာ၊ Qink၊ Escputil နှင့်အခြားအသုံးချပရိုဂရမ်များအတွက်ကျွန်ုပ်ကြိုးစားသည်။ သို့သော်ကိစ္စမရှိပါ။ ထူးဆန်းသည်မှာယခင် Ubuntu ဗားရှင်းများတွင် Escputil သည်အံ့ဖွယ်အမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ၁၀.၀၄ တွင် Epson T10.04 နှင့် ပတ်သက်၍ ကိစ္စမရှိပါ။
Nope ။ တစ်ယောက်ယောက်ကဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိရင်ငါလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်။ ...
Kirtash ၁၁၉၇ ဟုသူကပြောသည်
တိုက်ဆိုင်လိုက်တာ! ငါ့မှာ Stylus CX5600 xD ရှိတယ်။ ငါအရာတစ်ခုအကြောင်းကိုမသိရပါဘူး ... ငါကအရာတစ်ခုအလွန်စျေးကြီးပြီးသူတို့သည်ငါ့ကိုခန်းခြောက်ကတည်းကစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့ကသာအသုံးပြုသည်။
လူကောင်းများ !! အပြစ်ကင်းသော epson t23 ပင်စည်ထဲကယူ! ငါ system ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ထားတယ်၊ windows မှာ lastintas မထည့်ဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမေးတယ်။ အခုငါ linux နဲ့ porbar ချင်တယ်၊ ငါဒီ system နဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိသေးဘူး။
ငါပရင်တာကိုဖွင့်လိုက်သောအခါ၎င်းသည်၎င်းကိုအသိအမှတ်မပြုပါ၊ ၎င်းသည်ကိရိယာအသစ်မှမည်သည့်အသံမှမထုတ်ပေးပါ။ အခြား epson မော်ဒယ်အတွက်ယာဉ်မောင်းကိုပြောင်းလဲရန်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်သလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ပရင်တာကို T20 အဖြစ်တပ်ဆင်ပြီး၎င်းကို CX5600 အဖြစ်ထည့်သွင်းရန် uninstall လုပ်ခဲ့သည်။ သို့သော်ပြန်လည်တပ်ဆင်သောအခါကုန်အမှတ်တံဆိပ်ရွေးချယ်မှုမျက်နှာပြင်မှပုံစံကိုရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်သောနောက်ဆုံးနေရာသို့တိုက်ရိုက်သွားသည်။ တစ်နေရာရာတွင်သိမ်းဆည်းထားသကဲ့သို့ထိုခြေလှမ်းကိုကျော်လိုက်ပါ။ ငါပရင်တာလုံးဝကို uninstall လုပ်ဖို့ရှိသည်။ ငါလုပ်ပေးသကဲ့သို့?
အကောင်းဆုံးအာဂျင်တီးနား Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်း
ကျွန်ုပ်သည် terminal geek တစ်ယောက်နှင့်ကျွန်ုပ်၏အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းများမှာ "roguelike" ဖြစ်သည်